thinzar's blog: December 2007
Forwarded email တစ်ခုကနေရလို့ ဖြေကြည့်တာ။
[X]You like to eat chicken feet. = အဖွားချက်တာဘဲ ကြိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် ကြိုက်တယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်မယ်။
[ ] You sing karaoke. = ဒါတော့ လုံးဝဘဲ။ တရုတ်နဲ့ ကာရာအိုကေဆိုတာနဲ့ ဘာဆိုင်သလဲ မသိ။
[ ] You've worn glasses ever since you were in fifth grade. = ငါးတန်းတုန်းကတော့ အမြင်အာရုံကောင်းသေးတယ်။ အခုမှ ပုလင်းဖင် တပ်ထားရတာ။
[ ] You'll haggle over something that is not negotiable. = ဈေးဆစ်ရတဲ့ အလုပ်ကို အရမ်းမုန်းတယ်။
[X]You areamath genius. = ဟိဟိ .. တစ်နဲ့ တစ်နဲ့ပေါင်းရင် နှစ်။
[X] You take showers at night. = shower နဲ့စာရင် ညမှာ ခေါင်းလျှော်ရတာကို ဘယ်လို ကြိုက်လဲ မသိ..
[X] You avoid the non-free snacks in hotel rooms. = ဟိုတယ်မှာ ပိုက်ဆံထပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ကတော့ လုံးဝ မထိဘူးဘဲ။
[X] You say "aiyah!" and "wah!" frequently. = စိတ်မရှည်ရင် "aiyah" လို့ပြောပြီး ဝမ်းသာရင် "wah" လို့ပြောလေ့ရှိတယ်။
[X] You save grocery bags. = shopping ကပြန်လာရင် အိတ်တွေ အားလုံး ခေါက်သိမ်းထားတယ်။ အိတ်တွေအားလုံးကို အိတ်အကြီးကြီး တစ်လုံးထဲ ထည့်ထားတယ်။
[X] You twirl your pen around your fingers. = ဒါက ဘာလို့ ဒီlist ထဲ ရောက်နေသလဲ မသိပါဘူး။ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေကနေ အကျင့်ရလာတာကို။
[X] You have been taught that wasting food isasin. = အစားအစာကို ပစ်ရင် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်း ကနားထောင်လာရတဲ့ အဖွားရဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းတစ်ချပ်ပါဘဲ။
[X] Your dad thinks he can fix everything himself. = ဟုတ်ပါ့။ ဟုတ်ပါ့။
[X] You beat eggs with chopsticks. = မွှေလို့ အကောင်းဆုံးကတော့ တူပါဘဲကွယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းတွေက ချာပါတီလုပ်ဖို့ ဂျုံမွှေခိုင်းရင်တောင် တူနဲ့မွှေရမှ..
[X] You like congee with thousand-year-old eggs. = ရှလွတ်..
[X] You have eaten moon cakes. = ဒါပေမယ့် တရုတ်လမုန့်က မန္တလေးက လမုန့်ကို လုံးဝ မမှီတာ အမှန်ဘဲ။
[X] If you don't live at home, when your parents call, they ask you if you've eaten, even if it's midnight. = ဘယ်အချိန် ဖုန်းဆက်ဆက် သမီး နေကောင်းလား။ ထမင်း စားပြီးပြီလားနဲ့ စတာဘဲ။
[X] You email/msn your friends, even though you're only 10 feet apart. = ဒါကတော့ ပေါကြောင်ကြောင် သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ရသွားတဲ့ အကျင့်
[X] You can read traditional chinese = အင်း.. နည်းနည်းတောင် မေ့ကုန်ပြီ။ အမှတ်တစ်ဝက်ဘဲ ယူရင် ကောင်းမလား မသိ။
[X] Your toothpaste tubes are all squeezed paper-thin before they are thrown away. = ဒါက ကပ်စေးနှဲတာ..
[ ] You know what pearl milk teas are. = သိဝူး။
[X] You bring fruit with you asagift when you visit people's homes. = ဘယ်သူက စလိုက်လဲတော့ မသိပါဘူး။ ထုံးစံကို ဖြစ်လို့။
[ ] You have acquiredataste for bitter melon. = ခါးတာဆို ဘာမှ မကြိုက်ဘူး။
[X] You eat every last grain of rice in your bowl, but don't eat the last piece of food on the table. = ထမင်းတော့ ပန်းကန်ပြောင်နေအောင်ကို စားတယ်။ နောက်ဆုံး piece ကို မစားဘူးဆိုတာက အပျိုကြီး ဖြစ်မှာစိုးလို့။
[X] Your parents argue with other adults over the dinner bill. = သူများနဲ့ လုရှင်းကြတာလေ။ သူများကိုဘဲ ပေးခိုင်းလိုက် ပြီးရော..
[X] You love to use coupons. = ပိုက်ဆံကုန်သက်သာတာ မကြိုက်ဘဲ နေမလား။
Total = 20/25 x 100 = 80%
So, I'm 80% Chinese.
အရင်က အီရန်ဆိုတာ အီရတ်နဲ့ ခဏခဏ စစ်ဖြစ်ပြီး နျူကလီးယား ထုတ်ဖို့ဘဲ စဉ်းစားနေတဲ့ နိုင်ငံလို့ဘဲ သိထားတာ။ ပထဝီတို့ သမိုင်းတို့ နဲ့ ခပ်ဝေးဝေးနေနေမိတာတောင် နည်းနည်း ကြာသွားပြီ။ ကျမလုပ်နေတဲ့ ရုံးမှာ training ဆင်းနေတဲ့ အီရန်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့မှ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့ နဲ့ တစ်ခြား မှတ်သားစရာလေးတွေကို တအံ့တဩ နားထောင်လိုက်ရတယ်။
၁၉ရာစု မတိုင်ခင်ကတော့ အီရန်ဆိုတာ တစ်ကမာ္ဘလုံးက ပါရှားလို့ဘဲ သိထားတယ်။ ပါရှန်း အင်ပါယာနဲ့ အီရန်နဲ့ အခုမှဘဲ ဆက်စပ်မိတော့တယ်။ ပြီးတော့ အီရန်မှာ နေတာ ပါရှန်းလူမျိုးတွေတဲ့။ အာရပ်နိုင်ငံတွေနဲ့ နီးနေတော့ အာရပ်လူမျိုးတွေများလားလို့ ထင်နေခဲ့တာ။
အဲဒီကောင်မလေးက Esfahan ဆိုတဲ့ မြို့ကပါ။ "Esfahan is half of the world" ဆိုပြီး ဒီမြို့ရဲ့ အလှအပကို ပြင်သစ်စာဆို တစ်ဦးက ဆိုခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။ Esfahan မြို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ပုံပြင်တွေထဲက ပါရှန်း အင်ပါယာကိုတောင် ပြန်မြင်ယောင်လာတယ်။ တို့နိုင်ငံမှာလည်း လှတဲ့နေရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်ကွယ်။
မှတ်သားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့ရဲ့ ရုံးချိန်ဘဲ။ အီရန်က ရုံးတော်တော်များများ မနက်၈နာရီကနေ နေ့လည် ၁၂ နာရီလောက်ထိ အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ အားလုံး အိမ်ပြန် ထမင်းစားကြပြီး တရေးတမော အိပ်ကြတယ်ဆိုဘဲ။ သူတို့က နေ့လည်စာကို လုံးဝ heavy စားတာ။ ပြီးမှ ညနေ ၄နာရီကနေ ည ၉နာရီလောက်ထိ အလုပ်ဆက်လုပ်ကြတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် နေ့လည်ပိုင်းအချိန်ဆိုရင် မြို့ထဲမှာ လူရှင်းနေတတ်ပြီး ဖျားရင်တောင် ဆေးခန်းကို မနည်း လိုက်ရှာရတယ်တဲ့။ ကမာ္ဘပေါ်မှာ ဒီလိုရုံးချိန်မျိုး ရှိတဲ့ နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာ အခုမှဘဲ ကြားဖူးတော့တယ်။ ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး။ ထမင်းစားပြီး ခဏပေးအိပ်လိုက်တော့ အလုပ်ပြန်လုပ်ရင် productivity တက်လာမယ်ထင်တယ်။
နောက်တော့လည်း ဆက်ပြောရင်း သမိုင်းကြောင်းတွေ ရောက်သွားတယ်။ သမိုင်းရေးရင်တော့ ဖတ်တဲ့သူတွေ အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီလောက် နိုင်ငံပေါင်းစုံက ကျောင်းသားတွေ ရှိတဲ့ ကျောင်းမှာ လေးနှစ်တက်ခဲ့တာတောင် ကျမရဲ့ ဗဟုသုတက တော်တော့်ကို နည်းနေသေးတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရင်း...
Just now, I happened by to browse through KICT’s APC-ACM-ICPC Programming Contest photo gallery, an event took place on 4th-5th December, 2007.
… I feel proud and delighted to see the event hosted by KICT.
… Makes me kinda miss my student life.
… Remind me of the good old days in programming contests.
… The participants’ joy, anxiety, nervousness, satisfaction, frustration, unity, impatience, concentrations and such such feelings that they might have had encountered during the5hours were seemed transferred towards me, as browsing through the gallery.
Congratulations to the winners! And of course, even if you are not the winner, I congratulate you for having enough self-confidence to join the competition.
Let me end this withafew quotes regarding competitions:
* Live daringly, boldly, fearlessly. Taste the relish to be found in competition - in having put forth the best within you. (Henry J. Kaiser)
* Besides winning, the most fun thing is getting out there and mixing it up with friends; it's the competition. (Al Unser, Jr.)
* Competition is the whetstone of talent. (Traditional Proverb)
* Enjoy the successes that you have, and don't be too hard on yourself when you don't do well. (Patty Sheehan )
I just noticed gmail's new features: group chat and smileys. (smileys doesn't come out this nice on IE, the screenshot beside is on Firefox.) Nice, huh.. there are tons of nicer smileys in YM.. but whatever, i prefer gtalk to any other IM services.